Ismaela : “Tia lehilahy aho… fa hanambady vehivavy!”
Tovolahy mbola tena ao anatin’ny hatanorana tanteraka i Rakotonandrasana Ismael. Tsy mitovy amin’ireo lehilahy hafa namany nefa izy satria tia lehilahy.
Na dia faniriany aza ny hiaina malalaka izany fahafahana mitia izany dia maro ireo zavatra manery azy ka tsy ahafahany manao izany. Mizara ny fiainany amin’ny maha-lehilahy tia lehilahy azy i Ismael. Araho ny resadresaka nifanaovana taminy:
Jejoo: Ahoana no nahafantaranao fa tia lehilahy ianao?
Ismael: Efa naniry vavy ny reniko hatramin’izaho tany am-bohoka. Ny échographie natao tamin’izany nampiseho foana fa vavy aho. Mavokely avokoa noho izany ny akanjo nandraisana ahy tamin’izaho teraka. Efa nanomboka tamin’izany aho dia efa nahafantatra fa tsy mitovy amin’ireo lehilahy hafa.
Jejoo: Nanomboka teo amin’ny faha-firy taona izany no tena nitsiry izany fitiavana lehilahy izany?.
Ismael: Folo taona aho tamin’izany. Niaraka tamin’ny namako vehivavy aho fa nahita lehilahy nahafinaritra be ahy izay. Nidobodoboka be ny foko nahita azy ary teo no nahatsapako fa tia lehilahy aho.
Jejoo: Mahafantatra izany ve ny ray aman-dreninao?
Ismael: Ny raiko moa efa maty. Ny reniko kosa manontany ahy matetika raha efa manana olon-tiana aho. Rehefa mamaly aho dia lahy sa vavy hoy izy, fa izy mbola tsy mahafantatra hoe miaraka amin’ny lehilahy aho. Ny zokiko no mila vaniny amiko foana. Tsy manaiky ny tranga mahazo ahy ary tsy mety miara-dalana amiko izy. Mankarary fo ahy ilay izy indraindray.
Jejoo: Manana olon-tiana ve ianao?
Ismael: Manana olon-tiana mihitsy aho. Nanomboka tamin’ny 2016 izahay no niaraka ary izy no “premier amour”-ko. Mpiara-mianatra izahay. Izy koa tia lehilahy mitovy amiko ihany dia nifanadala teo ary lasa nifankatia.
Jejoo: Ahoana no iainanao izany, manoloana ny fiaraha-monina sy ny namana?
Ismael: Efa tao anatiko foana ilay izy dia voatazoko. Miezaka niova ihany aho fa tsy nety ilay izy. Nitory fitiavana tamina vehivavy ihany aho saingy menatra no sady matahotra. Tsy menatra amin’izany ny tenako, ary rehefa miaraka aza izaho sy ny olon-tiako dia mifampitantana izahay eny an-dàlana. Tsy mampaninona ahy ny resaka ataon’ny olona satria efa izay aho.
Jejoo: Hanambady lehilahy izany ianao ao aoriana?
Ismael: Tsy maintsy hoe hanambady vehivavy ihany aho any aoriana any, satria tsy sitrak’Andriamanitra ilay manambady lehilahy amin’ny lafiny iray. Izaho mantsy ao anatina antokom-pihira. Tsy hisy fitiavana aloha ao anatin’ilay tokantrano fa fanalana henatra eo anivon’ny fiangonana fotsiny no hanambadiako vehivavy.
Jejoo: Ary inona no nofinofinao ao aoriana ao?
Ismael: Ny ho lasa toa an-dry D-Lain ireny no tiako atao rehefa any aoriana any. Mihira dia mba ho lasa any an-dafy koa. Efa mamorona hira mantsy aho amin’izao fotoana.